Linus Torvalds inowana marii? Mubairo wababa veLinux kernel | Linux Vakapindwa muropa
Zvichida vazhinji vanoshamisika, nekuda kwekuda kuziva, Linus Torvalds inowana marii. Ivo baba veLinux kernel vanofanirwa kuwana muhoro muhombe, nekuti ivo ndivo musiki weiyo kernel iyo inofambisa nyika, ehe, iyo inofambisa nyika. Kubva kune mamwe ma satellite, rovers, uye ngarava, kune magetsi magetsi, kuburikidza nevakuru vepamhepo, kusvika kumamirioni enhare mbozha, mota, zvishandiso, zvemagetsi zvevatengi, marobhoti, zvigadzirwa zvemumaindasitiri, nezvimwe.
Mune ongororo ichangoburwa yeizvo vamwe vatungamiriri veindasitiri yehunyanzvi vakawana mu2018, dzimwe nhamba dzinonakidza dzakaratidzwa. Aya manhamba anotaura nezvekuwana kwakachena, ndiko kuti, kusanganisa muripo uye mabhenefiti. Uye, zvitende kana kwete, Linus Torvalds ndizvo yeavo vanotambira zvishoma… (Kunyangwe muhoro wake usina kushata zvachose).
Kana zvakadaro compensationsKana iwe ukataura nezve mamirioni emadhora akagamuchirwa mu2018, Elon Musk ndiye anowana zvishoma, zvisinei, izvi zvingave pasina kufunga nezve muripo muzvikamu, chete iwo akananga.
Linus Torvalds yaizodarika Jeff Bezos (Amazon) muripo wakananga, uine isingasviki mamirioni maviri, asi zvishoma, uye kumashure kwaMark Zuckerberg (Facebook) angave angangoita makumi maviri nematatu, kana Satya Nadella (Microsoft) ane vangangoita makumi maviri nematanhatu.
Nezve muripo ne stock stock or shares, chokwadi ndechekuti Linus Torvalds makore akareruka kure nehumwe hupfumi. Elon Musk akanyanya kusashanda neaya 2300 bhiriyoni ataurwa pamusoro. Inoteverwa naSundar Photosi (Google) ane 276 mamirioni, uye Tim Cook (Apple) anouya ne136.
Panzvimbo yacho panogona kunge paine Satya Nadella, iyo inovaona zvakanyanya sekubhadhara kwakananga. Muzvikamu "chete" anogamuchira mamirioni mashoma. Zvakawanda kana zvishoma zvakafanana naMark Zuckerberg (Facebook). Linus Torvalds naJeff Bezos vanonzwisisa zvishoma. Nekudaro, vese Mako naJeff ndevamwe vakapfuma kwazvo pasirese, kirabhu yakasarudzwa iyo Linus isingapinde.
Kana zvikafungwa hupfumi yeaizi matekinoroji greats, chinzvimbo cheaaya maECO pakupedzisira chaizove chakadai (sekureva kweForbes 2021 runyorwa):
Jeff Bezos: MaAmazon ane $ 177.000 bhiriyoni.
Elon musk: NaTesla, SpaceX, nezvimwe, waunganidza $ 151.000 bhiriyoni.
Bill Gates: Iyo yekare yeMicrosoft inowedzera mamirioni gumi nemaviri emamiriyoni emadhora.
Mark Zuckerberg: imwe yemasocial network ine 97.000 mamirioni emadhora.
Larry Ellison: Oracle muvambi anosvika 93.000 mamirioni emadhora.
Larry Page: Google inosvika 91.500 bhiriyoni emadhora.
Sergey Brin: nekutenda kuGoogle yakaunganidza 89.000 mamirioni emadhora.
Tim Cook: Apple inosara ine akangwara 1300 bhiriyoni emadhora.
Kana Photayi kana Nadella kana Linus Torvalds vari pane urwu runyorwa. Stratospheric manhamba asina chekuita nemari iyo Linus inogamuchira kubva kuLinux Foundation uye semusoro weLinux budiriro. Kunyangwe asiri iye CEO akadaro, ane chinzvimbo chakabhadharwa, uye zvinofungidzirwa kuti zvese muripo uye mabhenefiti aizove achiunganidza 1.6 mamirioni emadhora gore rega Chinhu chingangoita chisina musoro kana iwe ukafunga nezve kukanganiswa kwakaitwa chirongwa chako nenyika ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linus Torvalds inowana marii?
Ivo tech tech hupfumi hwakashomeka zvichienzaniswa nehupfumi hweRothschild neRockefeller hupfumi, asi nekuda kwe "chimwe chikonzero" havaratidzike mumatanho eForbes, nei zvakadaro?
Marco Antonio Mojica Campos akadaro
Zvinoita kwandiri sezvisina kukosha zvakanyanya kuti Linus Torval anowana yakawanda sei, zvinoita sekunge zvakanyanya kukosha kwandiri kuziva uye kuziva kuti hapana mumwe munhu pasi rese akaratidza rupo rwake. Saizvozvovo, isu tose tichafa ... asi panguva ino, ane chikwereti uye ane chikwereti chakanyanya ndiye murume uyu. Kuti inogona kuve neiyo hunhu hunogona kupihwa kuna Tesla. Ndiani aigara achida magetsi HIS INVENTION, yemahara kune vese uye yaisagona kuonekwa nehukuru uye kusingaperi makaro evapfumi veUSA. Akarova chiyero ndokupa chipo kunyika.
Pindura kuna Marco Antonio Mojica Campos